Home News Farmaajo “Waxaa igu ballan ah in aan burburiyo HirShabelle & GalMudug (Daawo)
Farmaajo “Waxaa igu ballan ah in aan burburiyo HirShabelle & GalMudug (Daawo)
Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta qudbad ka jeediyay xafladda furitaanka kalfadhiga afaraad ee Baarlabaanka JFS aya waxa uu ka hadlay arrimo badan, isagoo sheegay in aanay dan u ahayn dadka iyo dalka Soomaaliyeed nidaamka Federaalka ah.
Farmaajo aya wacad ku maray in uu si toos ah ula shaqeyn doono guddoomiyaha Baarlabaanka Hirshabeelle iyo GalMudug, wuxuuna sheegay in uu kala shaqeyn doono danta guud, taasoo macnaheeda ay tahay in uu maalgelin doono sidii xilka looga tuuri laha labada hoggaamiye ee Hirshabeelle iyo Galmudug.
Dad badan aya is weydiinaya in uu Farmaajo diidan yahay dhammaan Federalka mise wuxuu diidan yahay oo kaliya dowlad goboleedyada HirShabeelle iyo Galmudug? Maxaa keenay in uu labada si toos u carab dhabo?
Xildhibaanada ka soo gala labada dowlad goboleed ee Hirshabeelle iyo Galmudug aya lagu wadaa in ay shir degdeg isugu yimaadaan iyagoo ka arrinsan doona dagaala bareerka ah ee iclaamiyay Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha Hirshabeelle oo galabta dib ugu soo laabtay Muqdisho aya sheegay in haddii uu Farmaajo mooday in Hirshabeelle iyo Galmudug ay ari degen yihiin, waa uu ka werheli doonaa cidda degan.
Xiriirka Maamul goboleedyada iyo dowladda Federaalka ah ayaa faraha ka sii baxaya, waxaana layaab shacabka ku noqday hadalada qalafsan iyo dagaalka joogtada ah ee Fahad Yasiin milkiilaha dolwadda uu kula jiro dowlad goboleedyada
Previous articleAxmed Madoobe Oo Cambaareeyay Qaraxii Maanta Ka Dhacay Muqdisho
Next articleWaare”Amniga Muqdisho faraho ka baxay”
Xiisad Dagaal oo ka taagan Magaalada Dhuusa-mareeb